Qisada qoys Holandays ah oo been loogu sheegay aduunyo gadoon oo la helay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Tuulo ku taala dalkaasi Holand ayaa laga badbaadiyay qoys Lix Ka kooban oo been loogu sheegay in aduunku gadoomay. Qoyskan la soo badbaadiyay ayaa ku noolaa taxadka hoose ee guri ku yaala dhul beereed cidla Ku yaala. Waxa lagu yiri dadkii kale way wada dhinteen.
Dadka jaarka la ah ayaa sheegay in guriga uu ka soo baxo ninkeliya oo cagaf wata, waxana guriga uu ku xirey tobaneeyo kaamaro, wuxuuna isticmaali jirey qalabka askarta ee ay Ku fiiriyaan cadowga soo socda.
Caruurta ayaa la aaminsan yahay in hooyadood dhimatey oo Isla beerta ama guriga Ku Aasan tahay. Guriga ayaa lahaa keliya jaranjaro geedo ku xiran yihiin oo laga baxo.
Sidee loo ogaaday
Axadii la soo dhaafay ayay ahayd markii wiil 25 jira uu Ka baxsaday guriga xilli habeenimo ah oo inta kale wada hurdaan, wuxuuna kadib isku tuurey maqaaxi khamriga iibisa, waxaana loo wacay booliiska.
Caruurta taxadka gurigan Ku noolayd ayaan dugsi tegin 9 sanno oo ay ku jireen halkaas. Ninka soo baxsaday ayaa laga naxay sida uu u ekaa iyo dharka uu xirnaa.
Waxa guriga loogu tagey oday da jooga oo sariir jiifa iyo caruur laga naxay wejiyadooda. Waxay Ku noolaayeen sagaalkaa sano cunto ay Ka heli jireen beerta guriga. Caruurta ayaa hadda loo wareejay guri amaana halka aabahood loo kaxeeyay isbitaalka.
Turkiga oo wacad ku maray inuu Somalida garab taagnaado xilli argagixiso weerartay
Wahaabiyada argagixisada ee shabaab oo la ogyahay inay ...
Raiisal wasaare Xasan oo hakiyay nashruuc muran dhaliyay
Raiisal wasaaraha Somaliya Xasan Cali ayaa hakiyay nashruuc ...
Argagixiso bam gacmeed ku weerartay guri Muqdisho ku yaala
Dhiigmiiratada shabaab ayaa bam gacmeed ku tuurey guri ...
Maandeeq oo daaha ka faydey taariikh cajiiba. Gabadh la qabo lama ogolayn
Fanaanada ruug cadaaga ah ee Faadumo C/llaahi Maandeeq ...
Giriiga oo ciidamo u diraya Liibiya kadib hanjabaadii Dayib Erduqaan
Giriiga ayaa sheegay inuu ciidamo u dirayo Liibiya ...
Maxamed BK oo ku jeesjeesay dadkii argagixisadu xasuuqdey: (daawo)
Fanaanka Maxamed BK ee ay ku dheertahay cuqdada ...
Ruushka oo rakibey gantaalo oohin ka keenay Maraykanka
Gantaalaha Ruushku maanta ku wareejiyay ciidanka xooga dalka ...
Qofkaan waxa askarigu u diley Shan kun oo Somali ah i sii
Waxa maanta dil foolxun ka dhacay magaalada Jowhar ...
Turkiga oo looga digey inuu ciidamo u diro Liibiya
December, 25, 2019
Madaxweynaha Turkiga Dayib Erduqaan ayaa wacad Ku maray ...
Madaxa Somali galbeed oo dalbaday in gobolku helo xaqiisa matalaada
Madaxa Somali galbeed Mustafe Cagjar ayaa warqad u ...
Saylici waxaan leehay Suldaan Abshir waa suldaan Samaroon: Siyaasi Cali Faarax
Suldaan Abshir ayaa maalintii lixaad jeelka ugu jira ...
Wasiir Fowsiya oo qarxisay sida maamulka Somalilaan deeqdooda u soo doontaan
Wasiirka caafimaadka dawlada dhexe Marwa Fowsiya Abiikar oo ...